Fosil fuels: kedu ihe ha bụ, ihe atụ na uru na ọghọm | Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Green
Fosil mmanụ ụgbọala
Portillo nke German | | Ike ike
Fosil mmanụ ụgbọala Ha bụ isi iyi nke ike anyị nwere n'ụwa niile. Ọ bụ usoro nke ihe ndị dị ndụ na ụwa ma, mgbe agbanyechara okpomoku na nrụgide nke ala ụwa ọtụtụ narị afọ, etolite ma nwee nnukwu ume. Nhazi ya sitere na usoro ebumpụta ụwa nke ire ere nke ihe nwụrụ anwụ na nke e liri. Kemgbe ọtụtụ afọ, ire ere a aghọwo hydrocarbon nwere ike ịnwe ike.
N'isiokwu a anyị ga-elekwasị anya n'ịkọwapụta njirimara, ngwa, mmalite na mmetụta nke abụọ nke mmanụ ọkụ. You chọrọ ịma ihe niile gbasara ha?
1 Fosil fuels dị ka isi ike
2 Ofdị nke mmanụ ụgbọala
3 Mmanụ guzobere
4.1 Nsogbu gburugburu ebe obibi
4.2 Mmetụta ahụike
Fosil fuels dị ka isi ike
Worldwa anyị na-agbanwe agbanwe. Ọganihu akụ na ụba nke wepụtara usoro mmepụta ihe na-eme ka ọha mmadụ nwee ọganihu. Obodo mepere emepe kpamkpam ebe mmepe akụ na ụba jikọtara ya na ike.
Ike mmadụ na-eri kwa ụbọchị iji rụọ ọrụ niile a na-enweta site na isi mmalite dị iche iche. Offọdụ n’ime ha bụ emere maka mmeghari ohuru na ndị ọzọ adịghị. Ka ọ dị ugbu a, ụwa anyị na-abanye n'ime nke kachasị na ume ndị na-enweghị ike imegharị ụwa.
A na - enweta ike ume site na combustion nke ụfọdụ ihe sitere na ihe ọkụkụ na ihe ndị ọzọ dị ndụ na-ere ere kemgbe ọtụtụ afọ. Ọtụtụ nde afọ gara aga, ihe ndị a na-eli ozu site na mmetụta nke ebumpụta ụwa na ihe nke microorganisms. Ozugbo e liri ha n'ime ala, ha kwere ọnọdụ nke nrụgide na ọnọdụ dị elu nke nyere ha njirimara ha ugbu a.
Ofdị nke mmanụ ụgbọala
Ka ọ dị ugbu a, a na-eji ụdị mmanụ dị iche iche enweta ume. Onye ọ bụla nwere àgwà na mbido ya dị iche iche. Ka osi di, ha nile nwere oke ego nke eji ya mee ihe di iche iche.
Ọzọ anyị ga-akọwa ndị bụ isi:
Carbon. Ọ bụ kol ka ejiri mee ihe maka locomotives. Karịsịa carbon a hụrụ na nnukwu nkwụnye ego n'ime ala. Iji wepụ ya, a na-ewu ebe a na-egwupụta akụ.
Mmanụ ala. Ọ bụ ngwakọta nke hydrocarbons dịgasị iche iche na mmiri mmiri. Ihe mejupụtara ya bụ nnukwu adịghị ọcha ndị ọzọ ma jiri ya nweta mmanụ na ngwaahịa sitere na ya.
Gas nkịtị. Ihe mejupụtara ya kachasị gas. Gas a kwekọrọ na akụkụ kachasị ọkụ nke hydrocarbons. Ya mere, a na - ekwu na ikuku gas anaghị emebi mmetọ ma dịkwuo ọcha. A na-esite na mmanụ dị n'ụdị mmanụ.
Tarta tar na mmanụ na mmanụ. Ha bụ ihe eji akpụ ugo nwere ụrọ nke nwere obere ihe okike. Akwukwo ahihia a bu ihe eji eme ya na ihe yiri nke mmanu.
A na-ahụta ikike nuklia dị ka ụdị mmanụ ala. A tọhapụrụ ya n'ihi mmeghachi omume nuklia a na-akpọ Nkọwa nuklia. Ọ bụ nkewa nke atọ nke atọm dị arọ dịka uranium ma ọ bụ plutonium.
Mmanụ ala bụ mmanụ sitere n'osisi mkpofu nke mmiri, anụmanụ na ahịhịa dị ndụ. Ndị a dị ndụ biri n’oké osimiri, ọdọ mmiri na ọnụ na nso oke osimiri.
A na-ahụ mmanụ n'ime ndị mgbasa ozi ahụ sitere na mmalite. Nke a pụtara na okwu ahụ kpụworo bụ ihe e kere eke ma tinye ya na sedimenti. N'ihe nke miri emi karị, site na nrụgide nke akụ ụwa, ọ gbanwere ka ọ bụrụ hydrocarbon.
Usoro a na-ewe ọtụtụ nde afọ na oge. Ya mere, ọ bụ ezie na a na-emepụta mmanụ na-aga n'ihu, ọ na-eme ya na ntakịrị ntakịrị maka oke mmadụ. Ọzọkwa, ọnụego nke oriri mmanụ dị na nke mere na ụbọchị maka mmebi ya ka edozila. Na mmeghachi omume mmanụ, nje aerobic na-ebu ụzọ na nje bacteria anaerobic mgbe e mesịrị, na omimi ka ukwuu. Mmeghachi omume ndị a na-ewepụta oxygen, nitrogen, na sọlfọ. Ihe atọ ndị a bụ akụkụ nke ogige na-agbanwe agbanwe nke hydrocarbons.
Dị ka nsị si arụ ọrụ site na mmetụta nke nrụgide, a na-akpụ akwa ụra. N'ikpeazụ, n'ihi mbugharị mbugharị, mmanụ na-amalite impregnate niile ọzọ porous na ndị ọzọ permeable nkume. Akpọwo nkume ndị a "Wlọ nkwakọba ihe." N'ebe ahụ mmanụ na-agbado ma nọgide na ha. N'ụzọ dị otú a, a na-eme usoro ntinye mmanụ maka nrigbu ya dị ka mmanụ ọkụ.
Fosil fuels nwere ọtụtụ uru na ọghọm ma a bịa n'iji ha dị ka isi iyi ike. Ka anyị nyochaa ha:
Abba ụba na nkwụnye ego. Ọ bụ ezie na a na-ekwu maka mbibi ọzọ ọ ga-abụ, akụ nke mmanụ ụgbọ ala ka ga-enye anyị. Site na uto nke ume ohuru, ojiji ya na-ebelata kwa ụbọchị.
Ibilitynweta ụlọ na-adịkarịghị mgbagwoju anya. Nke a pụtara na, dịka ọ dị mfe iwepụta, ọnụ ahịa akụ na ụba na-ebelata.
Na-enye ọtụtụ ike na obere ego. Ekwesịrị ikwu na, n'agbanyeghị na ha abaghị uru maka ogologo oge, ha dị ike ma dịkwa ọnụ ala.
Transportgbọ njem ya na ebe nchekwa ya dị ọnụ ala ma dịkwa mfe. N’adịghị ka ume ọhụrụ, njem na nchekwa nke mmanụ ọkụ dị mfe. Renewables nwere ihe ndọghachi azụ na ha usoro nchekwa.
Uzo adighi ekwesi ebe obu na ha kere otutu udiri. Anyị ga-atụle ha na akụkụ.
Nsogbu gburugburu ebe obibi
Combustion, mmịpụta, nhazi na njem nke mmanụ ụgbọ ala ndị a nwere nsonaazụ griin haus. Fọrọ nke nta 80% nke ikuku carbon dioxide n’uwa nile ha na-abịa site n’iji mmanụ ọkụ eme ihe.
Mmetọ na-emetụta ndị bi na ya ma na-arịa ọrịa iku ume na ọrịa obi. Ngalaba kachasị emetụta ndị mmadụ bụ ụmụ nwanyị dị ime, ndị agadi na ụmụaka. Aremụaka kachasị emetụta karịsịa, ebe ọ bụ na ịgbanye karịa mgbe ị na-egwu egwu, ha na-eku ume ikuku ma na-a moreụkwu mmiri. Nmekorita gị etolitebeghị iji wepụ ihe ndị na-emerụ ahụ.
Ka anyi nwee olile anya na ume ohuru na edochi mmanu fosil ma meziwanye ndu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Green » Ike ike » Fosil mmanụ ụgbọala
Daalụ maka isiokwu gị na gburugburu ebe obibi ọ kọwara nke ọma
Zaghachi GUADALUPE GOMEZ HERNANDEZ